Oromoon Walloo humna Naannoo Tigiraay irratti waraana akka banuuf sossobamaa jiraachuu - Independent Oromia
Oromoon Walloo humna Naannoo Tigiraay irratti waraana akka banuuf sossobamaa jiraachuu
Mootummaa Naannoo Amaaraaf daboo ba’ee, humna Naannoo Tigiraay (ABUT) irratti waraana akka banuuf jecha, Oromoo Walloof waamichi qaamota Mootummaa Naannoo Amaaraatiin taasifamaa jiraachuu.
Oromtichi maqaan isaa Mallasaa Caalaa jedhamu, Giddu-gala Oromiyaa Magaalaa Buraayyuu keessatti, mana hidhaa keessatti ajjeefamuun, reeffi isaa badheetti darbamuu.
Haaluma wal-fakkaatuun, dargaggeessi Oromoo, maqaa fi teessoon dhalootaa/jireenyaa isaa ammaaf kan hin qulqullaa'in jiruu fi kutaa Oromiyaa biraa irraa gamasitti geeffamuu isaa kan odeeffanne tokko, ajjeefamuun reeffi isaa Konyaa Arsii Bahaa Ona Gadab Asaasaa keessatti bakkeetti gatamuu.
Odeessa guutuu har'aaf qindeeffanne suur-sagalee armaan gadii irraa hordofuu ni dandeessu.
Sagaleelee maxxansinu hunda quba-qabaachifamuuf nu hordofaa.
Sagantaa keenya kana sagalee qofaan caqasuu dandeessu.
Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021
Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021
Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021